Xiddig kooxda Man City ah oo sheegay in Liverpool ay u qalanto hoggaanka horyaalka Premier League – Gool FM
(Manchester) 03 Dis 2019. Liverpool ayaa ku hogaamineysa horyaalka Premier League 40 dhibcood, iyagoo farqi 11 dhibcood ka sareeya kooxda sida weyn ay u dagaalamaan ee kaalinta 3-aad ku jirta ee Manchester City.
Daafaca garabka midig ee kooxda Manchester City Kyle Walker ayaa qirtay in Liverpool ay u qalanto hogaaminta miiska kala sarreynta horyaalka Premier League ilaa iyo haatan.
Dhinaca Kyle Walker ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in horyaalka uu weli dheer yahay, isla markaana ay suurtogal tahay in kooxdiisa Manchester City ay sameyso soo laabasho.
Kooxda Liverpool ayaa qaadaneysa xilli ciyaareed fiican ee horyaalka Premier League ah, kaddib markii ay guul gaareen 13 kulan, waxay barbaro galeen hal kulan oo kaliya, mana la kulmin wax guuldarro ah ilaa iyo haatan.
Haddaba Kyle Walker ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “Goal” wuxuu ku sheegay:
“Xoogaa waxaa nagu dhacay isbadel, laakiin wali waxaan haysannaa maskax xirfadeed”.
“Waa inaan kor ugu qaadno koofiyadaha Liverpool, waxay ahaayeen kuwo aad u fiican, xaqiiqdii wey u qalmaan inay noqdaan hogaamiyaasha horyaalka Premier League, laakiin arrinta weli ma dhamaanin”.
Si kastaba ha noqotee, Kooxda Manchester City ayaa u safreysa Burnley caawa oo Talaado ah, iyagoo raadinaya inay sii wataan rajadooda guuldarro la’aanta ah kaddib dib u dhac kale oo Sabtidii ku dhacay.